Indlela kuba Oyedwa Entrepreneur (Mna-Uqeshiwe Umntu)? - FTS - Federal Izinto Yenkonzo karhulumente ka-Russia - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
Indlela kuba Oyedwa Entrepreneur (Mna-Uqeshiwe Umntu)? - FTS - Federal Izinto Yenkonzo karhulumente ka-Russia
Amaxwebhu zizalisiwe kwi (ekhutshwe) kwi-Russian
Ukuba ungummi wangaphandle okanye stateless umntu, kuba injongo ukuzithwala kwi ishishini kwi-Russia ngaphandle forming neenkqubo zomthetho iqumrhu njengokuba sole proprietor, kufuneka kwenziwe ezi zinto zilandelayo amanyathelo: uxwebhu besomeleza idilesi yokuhlala ka-langaphandle abemi beli stateless abantu kwi-isirashiya zibe: A yokuhlala imvume kwi-Russia (kuba langaphandle abemi beli stateless abantu, ukuba baya neplanethi abahlala kuyo emmandleni ye-isirashiya) A isiqinisekiso yethutyana asylum kwi-isirashiya (kuba langaphandle abemi beli stateless abantu ngokumnika yethutyana asylum)Kuba sisenza ishishini imisebenzi Us uxwebhu malunga kubekho conviction ezifunekayo. Ezinjalo uxwebhu kufuneka arranged phambi ukufakwa kwi-ubhaliso igunya.
Kufuneka ke ukuba uceba ukuzithwala ngaphandle ezithile iintlobo entrepreneurial umsebenzi kwi imfundo, uqeqesho, kwaye uphuhliso minors, umbutho zabo kuphumla kwaye ezolonwabo, ulondolozo lwempilo, intlalontle kwaye loluntu iinkonzo kwi ariya ulutsha isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo, inkcubeko kunye unguye kunye nokuthabatha inxaxheba minors.
Uluhlu enjalo imisebenzi samkelwe ngu-Karhulumente isirashiya. Witnessing usayino-sicelo nge notary ayikho kufuneka ukuba umfaki-sicelo efake amaxwebhu ngqo (umntu) kwigunyabantu lokubhalisa kwaye ngaxeshanye limele isazisi. Kwezinye iimeko, utyikityo-sicelo kwi-sicelo uya kuba eziqinisekisiweyo nge notary. Ikopi yoxwebhu eqinisekisa uqwalaselo lwakho njengoko langaphandle ummi okanye stateless umntu. Ukuba uxwebhu ayiqulathanga ulwazi malunga umhla nendawo yakho yokuzalwa, kufuneka kanjalo ufake ikopi yakho yokuzalwa isiqinisekiso okanye ikopi enye uxwebhu besomeleza umhla nendawo yakho yokuzalwa. Wokuqala okanye ikopi yoxwebhu besomeleza idilesi yakho yokuhlala kwi-isirashiya (ukuba ezinikezelwe ukhuphelo uxwebhu eqinisekisa uqwalaselo lwakho, okanye uxwebhu besomeleza ilungelo lakho kuba yinxalenye okanye isigxina yokuhlala kwi-isirashiya ayiqulathanga ulwazi malunga le dilesi). Uxwebhu apho limisela ebusweni okanye kubekho a conviction, kwaye (okanye) kunjalo, ulwaphulo-mthetho prosecution okanye ulwaphulo-mthetho prosecution dismissal (ukuba uceba ukuzithwala ngaphandle ezithile ishishini imisebenzi, uluhlu apho samkelwe ngu-Karhulumente isirashiya). Kwimeko apho umntu ebhalisiweyo njengoko oyedwa entrepreneur, eyona encinci, uxwebhu besomeleza ilungelo umntu ukuze yenze imisebenzi yoshishino ngu luyafuneka. Ngaxeshanye kunye filing a impahla lwamaxwebhu kuba urhulumente ubhaliso nibe isicelo yiya a esenziwe lula izinto system (isixa-mali karhulumente umsebenzi kuba urhulumente ubhaliso umntu njengoko oyedwa entrepreneur ngu- RUR. Iinkcukacha malunga nentlawulo urhulumente umsebenzi ingaba wabeka kwiwebhusayithi ye FTS. Zingeniswe iikopi amaxwebhu kufuneka eziqinisekisiweyo nge notary. I-okukodwa xa-sicelo ngokwakhe okanye herself lunika ikopi amaxwebhu ngqo kwigunyabantu lokubhalisa kwaye ngexesha elinye siqinisekisa fidelity ka-iikopi abandakanyekayo amaxwebhu kwi-yoqobo, eziya wabuyela-sicelo xa ubhaliso igunya imiba isaziso uxwebhu kokuba zifunyenwe. Inani amakhasi kufuneka kubonakaliswa ngu utyikityo-sicelo okanye notary kwi emva lokugqibela kwiphepha kwi-i-insertion ndawo.
Isicelo kwaye isihlomelo kufuneka kuzaliswa yi-typescrypt okubhaliweyo okanye ngesandla ushicilelo iileta kunye ukusebenzisa ink okanye ballpen ka-onzulu blue okanye umbala omnyama Ukuba naliphi na icandelo okanye incopho kwicandelo inkqubo ayikho wazaliswa, ngexesha elifanayo: i crossed ngaphandle icandelo ngu-beka phantsi.
Uxwebhu langaphandle ulwimi ingaba ngokulawulwa isiqinisekiso nge-i-apostille okanye consular legalisation kwaye emva uguqulelo kwi-Russian. Uguqulelo kufuneka notarized. Amaxwebhu, apho authenticity ye-aplicant ngu utyikityo ngu witnessed yi-langaphandle notary, ingaba ngokulawulwa isiqinisekiso nge-i-apostille okanye consular legalisation kwaye emva uguqulelo kwi-Russian. Uguqulelo kufuneka notarized.
Kwi-e-ubhaliso ungakhetha indlela kokufumana uxwebhu
Kufuneka ifayile a ezilungiselelwe misela lwamaxwebhu ukuba ubhaliso irhafu igunya e indawo yakho ohlala kuyo kwi-isirashiya.
Ngaphakathi kungekho ngaphezulu kwama- zomsebenzi ukususela ka emveni kokufumana uxwebhu kwigunyabantu lokubhalisa kufuneka ukuba luhlole uxwebhu ayingenisileyo, kwaye mhlawumbi yenza isigqibo malunga imeko yakho yobhaliso njengoko oyedwa entrepreneur izigqibo ezifanelekileyo iimbali Urhulumente Irejista, okanye yenze isigqibo malunga ukwaliwa kwesicelo ubhaliso. I-exhaustive uluhlu i-emidlalo kuba ukwaliwa kwesicelo ubhaliso icacisiwe yi-mat, unguye.
Federal Umthetho -FZ.
Ubhaliso oyedwa entrepreneur ngomnye-yeka-shop umgaqo-nkqubo zilandelayo apho kwigunyabantu lokubhalisa hayi kuphela yenza ishishini ubhaliso, kodwa kanjalo kubhalisa umntu kuba taxation ngeenjongo, ukuthumela electronically i inkampani i-data extra-budgetary imali kwaye izitatistiki-arhente.
Ukuba njalo amaxwebhu wakho sele ophunyezwe ngempumelelo, ngomhla wonyulwa yindlu kwigunyabantu lokubhalisa uyakwazi ukuthatha ngaphandle zilandelayo amaxwebhu: kwimeko kuwe akazange jonga ubhaliso igunya kuba ithatha amaxwebhu, ziya kuthunyelwa zomthetho kwidilesi yakho inkampani. Ukulandela ukuphunyezwa kwezi iintshukumo nibe ukuzithwala kwi weshishini njengoko oyedwa entrepreneur ngaphandle forming a isemthethweni qumrhu. Emva kokufumana ubhaliso amaxwebhu yakho yobhaliso njengoko oyedwa entrepreneur kufuneka ilungelo - (kodwa ngaba abakho obliged) ukwenza yayo tywina. Umgaqo-nkqubo ka-ukuvula i-akhawunti kwaye uluhlu amaxwebhu afunekayo ichaziwe yi-Umyalelo we-Bank of Us ka. Nceda, qaphela ukuba zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe ukususela ngomhla i-akhawunti ebhankini ivula kufuneka yazisa yakho irhafu igunya kunye olu lwazi. NB! Xa nokubhalisa njengoko oyedwa entrepreneur, ulwazi kwi iyasebenza loxwebhu besomeleza ilungelo langaphandle ummi okanye stateless umntu kuba yinxalenye okanye isigxina yokuhlala kwi-isirashiya ngu ofakwe kwi-Imo Ubhalise. Kwimeko indawo ephelela kuyo loxwebhu besomeleza ilungelo langaphandle ummi okanye stateless umntu ukuba neplanethi abahlala kuyo kwi-isirashiya, imo yabo ubhaliso yabucala entrepreneur uza ngokuzenzekelayo ayayeka ukuba ihlala isebenza, ukususela umhla wokuphelelwa uxwebhu. I-okukodwa xa-sicelo ngokwakhe okanye herself lunika ikopi amaxwebhu ngqo kwigunyabantu lokubhalisa kwaye ngexesha elinye siqinisekisa fidelity ka-iikopi abandakanyekayo amaxwebhu kwi-yoqobo, eziya wabuyela-sicelo xa ubhaliso igunya imiba isaziso uxwebhu kokuba zifunyenwe.
Ixilongo layo ke unyana zahlangana Russian lawyer kuba ukonakaliswa ulwazi Clinton - Reuters
real registro di propiedat inmobiliaria en Abogado uso